Rose of Sharon: ဒို့ငယ်ငယ်တုန်းအရွယ်
Posted by rose of sharon at 11:49 AM
Kay February 2, 2012 at 12:20 PM
နမူနာ ယူ သွားတယ်.်.ဘယ်လို ဆော့ရမလဲ လို့..( အဲ ) ဘယ်လို ရေးရမလဲ လို့..း)))
Thandar Lwin February 2, 2012 at 1:27 PM
ရေးချင်တာတွေ အများကြီး ဆိုရင် အများကြီးရေးပါ အမ ..အများကြီးဖတ်ချင်တယ် ။
rose of sharon February 2, 2012 at 2:17 PM
ကေရေ... ကေလဲအဆော့မက်ခဲ့သူဘဲ...အကြောင်းသိတွေပါနော်း))
သန္တာလွင်... အမက သူများရေးတဲ့ပို့စ်တွေရှည်ရင် ဖတ်ရမှာပျင်းတတ်လို့ ကိုယ့်အလှည့်ဆို ရှည်ရှည်ရေးမိမှာစိုးတား))
SHWE ZIN U February 2, 2012 at 2:45 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက အမှတ်ရစရာလေး ကို ဖတ်သွားတယ်နော်
သက်တန့်ချို February 2, 2012 at 4:08 PM
ငယ်ဘ၀တွေဟာ ပြန်တွေးမိတိုင်းအိပ်မက်မက်ကောင်းတဲ့အရာတွေပါပဲ ။
kiki February 2, 2012 at 5:08 PM
တို့ တတွေလည်း မောင်နှစ်မ ၆ ယောက်မှာ ယောကျာင်္းလေး ဆိုလို့ အကို တစ်ယောက်ပဲ ပါ တာ လေ ..ခြံထဲ က မာလကာပင် ၃ ပင်တော့ တို့တွေ မျောက်ရှုံးအောင်တက်ခုန်ကြတာနဲ့ သေပါလေရော.. အမ တယောက်လဲ အဲ့လိုပဲ ပြုတ်ကျဖူးတယ်.. ဟားဟား.. အတော်တူကြတာပဲ..
ငယ်ငယ်တုံးက ပျော်စရာအချိန်လေးတွေ ပြန်တွေးတိုင်း ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်တုံးပါပဲ ဖေါဖေါရေ.. ခုဆို အကို နဲ့ အစ်မတယောက်တို့ က တသက်စာခွဲခွာခြင်းမျိုးနဲ့ခွဲခွာ သွားခဲ့ကြပြီ..
ငယ်ငယ်တုံးက မေမေဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ စကားတခွန်းရှိတယ်.. မောင်နှစ်မတတွေ စုံတုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြ တဲ့ ။ နောင်ဆို ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်သွားကြရင် နေချင်လို့တောင် တူတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူး တဲ့ .. ခုမှ သဘောပေါက်မိတယ်..
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 2, 2012 at 6:39 PM
Nyi Linn Thit February 2, 2012 at 8:24 PM
အသားမည်းတဲ့ ဆရာမမြင်လို့ တစ်တန်းရောက်တာတောင် ငိုတုန်း ဆိုတာကိုတော့ သဘောကျ လို့မဆုံး၊း) ခြင်းနဲ့ ကွယနေရတဲ့ ဆရာမ အဖြစ်က သနားစရာ..၊း) မြွေလည်း ငရှဉ့်နဲ့ မှားပြီး အစားခံရတော့မလို့..၊ တော်သေးတယ် အဖေကယ်လို့...၊း) မရိုစ့်ရဲ့ ဒီပို့စ်မှာ ငယ်ဘဝက ရယ်စရာလေးတွေ၊ လွမ်းစရာ လေးတွေနဲ့ အချိုးကျနေ ခဲ့တယ်..၊ အင်း.. ဒီ့ထက် နည်းနည်းလောက် ထပ်ရှည်မယ် ဆိုရင်တောင် ရသေးရဲ့သားနဲ့လို့ တွေးလိုက်သေးတယ်..။း)
အပြုံးပန်း February 2, 2012 at 10:50 PM
အကျဉ်းချုံးပေမယ့် ဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ ပေါ်လွင်တယ်၊
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်း မြင်ရောင်ကြည့်မိတယ်၊
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘ၀ဟာ လွမ်းမောစရာလည်း ကောင်းတယ်နော်။
ညီရဲ February 3, 2012 at 1:04 AM
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ကြည့်ပြီး ငယ်ဘဝကိုတောင် ပြန်သတိရသွားမိပြီ အစ်မရေ...
san htun February 3, 2012 at 6:20 AM
မရို့ စ်တွေ ငယ်ဘဝလေးက ပျော်စရာကြီး..
ချစ်ကြည်အေး February 3, 2012 at 7:50 AM
ညီမရိုစ့်ရဲ့ ငယ်ဘ၀လေး....ပျော်စရာနော်...။ ပြန်မရနိူင်တော့ပေမဲ့ ကြေနပ်စရာပါ။ ကလေးဘ၀ကို ကလေးတစ်ယောက်လို သဘာဝကျကျ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာမဟုတ်လားးး
နေ၀သန် February 3, 2012 at 9:12 AM
အသားမည်းတဲ့ဆရာမလေး သနားပါတယ်.. သူ့ခြင်းထောင်းနဲ့ကာထားရရှာတာ.. :D.. အဲဒါနဲ့ ဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာ IELTS သင်တန်းမှာ ရှေ့ဆုံးတန်းကထိုင်တယ်၊ မနက်အစောဆုံးအတန်း၊ ဆရာ့ပါးစပ်က အာပုပ်နံ့နံတယ်.. အဲဒီအနံ့ကို မခံနိုင်ဆုံးပဲ.. ဒါနဲ့ စာအုပ်နဲ့ကာပြီးစာကြည့်တယ်... ဆရာက ကိုယ့်ကို သနားလို့.. သွားသွားတိုက်ပေးရတယ်.. :P... နောက်တစ်ခါ မရို့စ်ကို ခြောက်ချင်ရင် အသားမည်းတွေနဲ့ ခြောက်ရမယ်.. :D
rose of sharon February 3, 2012 at 4:22 PM
မရွှေဇင်၊ သက်တန့်ချိူ... ကျေးဇူးနော်...
ညီလင်းသစ်... ဟုတ်တယ်နော်၊ နောက်မှသက်သက်ထပ်ရေးမယ်
rose of sharon February 3, 2012 at 4:25 PM
နေဝသန်....ခုမကြောက်တော့ဘူး.. ကိုယ်တိုင်ကလည်းမဖြူရှာတော့လေ :D
သက်ဝေ February 3, 2012 at 11:03 PM
မောင်နှမတွေ အများကြီးနဲ့ စုစုဝေးဝေးနေခဲ့ရတဲ့ ပျော်စရာ ငယ်ဘဝလေးက လွမ်းမယ်ဆိုလည်း အတော်ကို လွမ်းလောက်ပါပေတယ်... ရိုစ့်ရေးတာ ဖတ်ရတာနဲ့ ကိုယ်တောင် ရောပြီး လွမ်းသွားတယ်...း)))
ငယ်ငယ်တုံးက လူကောင်သေးသလောက် အပြေးသန်တာရော၊ အိမ်မှာအ၀ယ်တော်၊ ခြေမြန်တော်လို့ အခေါ်ခံရတာရော တူတယ်။ ကျနော်ဆိုလဲ ဈေးကတော့ ၀ယ်ရသလားမမေးနဲ့ (ဈေးဖိုးထဲကနေ စားချင်တာစားလို့ရလို့ ကျနော်ကလဲ ကျေနပ်တယ်လေ win win ပေါ့။)။ အစ်မရေးထားတာဖတ်ပြီး ငယ်ဘ၀ရော၊ မောင်နှမတွေရော သတိရသွားတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း February 5, 2012 at 3:24 PM
ဆရာမခင်မျာ သူ့မျက်နှာကို သူ့ဆွဲခြင်းလေးနဲ့ ကာကာထားရှာတာ
ဖတ်ပြီးရီလိုက်ရတာ။ ကျနော်တို့လည်း မောင်နှမများတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်က အငယ်ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ မကစားလိုက်ရပါဘူး။ တစိမ့်စိမ့်တွေး ကြည်နူးရပြီး အဆုံးမှာ လွမ်းဆွတ်နာကျင်ရတာ ငယ်ဘဝ အကြောင်းပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 6, 2012 at 2:37 AM
လွမ်းမောစရာ အပြည့်နဲ့ ငယ်ဘဝ ပါလား မမရေ...
ပြန်လည်တွေးတိုင်း လွမ်းနေရမှာ ....
jasmine(တောင်ကြီး) February 6, 2012 at 12:38 PM
အပူအပင်ကင်းတဲ့ခလေးလေးဘဝကို တခါပြန်ပြီးရောက်ချင်သေးတယ်…… အပြစ်မရှိသေးတဲ့ခလေးလေးဘဝကို တခါပြန်ပြီးရောက်ချင်သေးတယ်…
အဖြူရောင်နတ်သမီး February 6, 2012 at 11:35 PM
ရို့စ်လေးရဲ့ ငယ်ငယ်ကဘဝအကြောင်းလေး လာဖတ်သွားပါတယ်..း)
An Asian Tour Operator February 13, 2012 at 4:41 PM
အနော.. ဖတ်ရတာ အားမရသလိုပဲ။